Kulan casho sharafa oo Suldaanka Guud ee Dir Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Ismaciil lagu soo dhaweeyey kana dhacay Galbeedka London. | Salaan Media
Home Wararka Kulan casho sharafa oo Suldaanka Guud ee Dir Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Ismaciil...
Kulan ay isugu yimadeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee degan London kulankaas oo jaaliyada Dalbeedka London ay kusoo dhaweyeen Suldaanka Guud ee beelaha Dir Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Ismaciil,Kulanka waxa kasoo qayb galay odayaal iyo dhalinyaro degan xaafadda Southall iyo agagaarkeeda.
Kulankan oo isugu jiray is waraysi iyo soo dhaweyn Suldaanka Cusub waxa ay ugu horeyn dadkii soo abaabulay afurka caawa ay kula dar-darmeenku Hambalyeeyeen xilka loo igmaday, waxa kale oo ay ku booriyeen in uu ka shaqeeyo had iyo jeer wanaaga oo xilkaa culus aad si wanaagsan uga soo baxdo. Kulanka afurka ahaa waxa ka hadlay dhalinyaro iyo odayaal kasoo qayb galay waxayna Ilaahay uga baryeen in xilkaa culus ee loo doortay in Illahay u fududeeyo.Waxa ay dhalinayradu qireen in u uyahay Suldaan dhalinyaro ah kana soo bixi kara wixii ka hor yimaada.
Suldaanka oo isna dhiniciisa ka hadlay ayaa ugu horeyn mahadnaq usoo jeediyey dhalinyaradan afurka caawa noo sameysay iyo dadkii kasoo qayb galayba,waxa uu Suldaanka hadalo wax ku oola oo isugu jirey waano iyo wacyi galin kasoo jeediyey kulanka, waxa kale oo uu sheegay in wixii karaankiisa ah uu qaban doono Insha Allah,idinkana aan idinka filaayo inaad ila shaqeysaan.
Suldaanka Guud ee Dir Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Ismaciil waxa dhawaan lagu caleemo saaray kulan ka dhacay Badhtamaha London laguna caleeo saaray SuldaankaWaxa uu kulamo gooni-gooni ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxda iyo odayaasha degan dalka Ingiriiska,dhinaca kale waxa uu hambalyoyin ka helay dad fara badan oo meelo kala du-duwan jooga.